GIT Archives - LinuxCapable
Otu esi etinye Git na CentOS 9 Stream
Mọnde, Jenụwarị 10, 2022 by Jọshụa James
Git bụ oru ngo mepere emepe nke a na-arụsi ọrụ ike na 2005 nke Linus Torvalds, onye okike sistemụ arụmọrụ Linux ama ama. Emebere Git maka ndị nrụpụta chọrọ sistemụ njikwa ụdị kwụ ọtọ mara mma. Ọtụtụ sọftụwia bụ mbọ imekọ ihe ọnụ na mgbe ụfọdụ nwere ike ịnwe ọtụtụ narị mmadụ na-arụ ọrụ…
Categories CentOS iyi Tags CentOS Stream 9, GIT
Otu esi etinye Git na CentOS 8 Stream
Git bụ oru ngo mepere emepe nke a na-arụsi ọrụ ike na 2005 nke Linus Torvalds, onye okike sistemụ arụmọrụ Linux ama ama. Emebere Git maka ndị mmepe chọrọ sistemụ njikwa ụdị kwụ ọtọ mara mma. Ọtụtụ sọftụwia bụ mbọ imekọ ihe ọnụ na mgbe ụfọdụ nwere ike ịnwe ọtụtụ narị mmadụ nwere nkwa…
Categories CentOS iyi Tags CentOS Stream 8, GIT
Satọdee, Nọvemba 6, 2021 by Jọshụa James
Categories Fedora Tags Fedora 35, GIT
Categories Mint Linux Tags GIT, Mint 20 Mint Linux
Tọzdee, Ọktoba 21, 2021 Tọzdee, Ọktoba 21, 2021 by Jọshụa James
Categories AlmaLinux Tags AlmaLinux 8, GIT
Saturday, October 30, 2021 Monday, October 4, 2021 by Jọshụa James
Categories Nkume linux Tags GIT, Nkume Linux 8
Monday, October 25, 2021 Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 22, 2021 by Jọshụa James
Categories Debian Tags Nnenna 11 Bullseye, GIT
Taa, anyị ga-eleba anya ka esi etinye ma kwalite na ụdị Git kachasị ọhụrụ. Ubuntu 20.04 na-ebufe ya na Git na ebe nchekwa ha bụ isi; Otú ọ dị, na Ubuntu 20.04 ịbụ usoro LTS, a na-emepụta ngwugwu ngwanrọ maka ịdị jụụ na anaghị agụnyekarị mwepụta ọhụrụ na ...
Categories Ubuntu Tags GIT, Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa